Emva kwayo yonke loo nto, ikhitshi elincinci alisiyongxaki -Ifanitshala -ukukhuthaza
Iindonga zegumbi lokuhlala
Iibhedi eziphindwe kabini
Iibhedi kwigumbi labantwana
Iibhokisi zanamhlanje zeedrowa
Amagumbi okulala anamhlanje
Iibhedi zabantwana ngebhedi eyongezelelweyo
Izitulo kwigumbi labantwana
Emva kwayo yonke loo nto, ikhitshi elincinci aliyongxaki
Ngomhla wama-29, 2020 NgoFebruwari 16, 2021 admin Ikhitshi langoku
Ayinguye wonke umntu onekhitshi elikhudlwana elinokubamba zonke izinto eziyimfuneko kwaye usenendawo eyongezelelweyo. Nokuba amakhitshi amancinci ahlukile kwaye siza kukunika izimvo ezimbalwa malunga nokuba nayo yonke into oyifunayo kuyo kunye nendlela yokugcina izitya nokunye okuninzi.
Itafile encinci inomtsalane wayo
Mangaphi amalungu ahlala kwikhaya lakho? Uhlala kangaphi etafileni? Kwisantya esikhoyo ngoku sehlabathi, umntu akanaxesha lokutya. Itheyibhile yodidi inokukubeka ekhitshini. Kuthatha isiqingatha sendawo kwaye ngequbuliso uyatyhala ekhitshini. Cinga ngetafile ejikelezayo ezimbini. Le tafile yothando ibuyile kwifashoni. Incinci, ilungele ikhitshi elincinci.
Sukuchitha indawo ngokungeyomfuneko. Amakhitshi aqhelekileyo aqholiweyo afuna indawo eninzi. Gcina imali kwikhitshi elenzelwe ukuthungwa. Iya kulunga ngaphakathi ngaphakathi, ayizukuthatha indawo enkulu, kodwa kwangaxeshanye kuya kubakho kuphela into ebalulekileyo oyifunayo.
Kutheni ungaphuculi ikhitshi kwaye uzise into entsha kuyo? Iishelufu ezivulekileyo zihamba kakuhle, ziya kukrwela kakuhle ikhitshi lakho kunye nendawo yonke. Awunayo yonke into kwiishelufa ezivulekileyo. Shiya iimbiza, iipleyiti kunye nezinye izinto mazisuswe uthuli kwiishelufa ezitshixwayo. Nangona kunjalo, ungashiya iziqholo okanye iiglasi zivelile.
Ukora ngombala omhlophe
Asicingi nje ngombala omhlophe weklasikhi. Kukho uluhlu olubanzi lomhlophe kwintengiso. Ungathini ngevanilla, pearlescent, glossy okanye matte umbala omhlophe? Akuyi kuba nako ukukhetha eyiyo ngokwakho. Sincoma ukusebenzisa eminye imibala ukwenza indawo ikhetheke. Umzekelo, i-navy blue okanye ebizwa njalo abahamba ze. Ngokufanelekileyo baya kuyandisa indawo kwaye ikhitshi lakho elincinci alisayi kubonakala lincinci.
izixhobo zasekhitshini ezincinci
Isifuba sedrowa yegumbi lakho lokuhlala
Uninzi lwezithuba ezithandwayo
Iitafile zasekhitshini nezitulo Ngomhla wama-29, 2020
I-TOP 5: Eyona bhedi iphambili ye-2018 ukuya kuthi ga kwi-500 euros NgoNovemba 20, 2017
I-TOP 5: Eyona ndonga iphilayo ye-2018 ukuya kwi-400 euros NgoNovemba 20, 2017
TOP 5: Eyona fenitshala yegadi yanamhlanje ye2018 NgoNovemba 20, 2017
Umxholo oqaqambileyo ngu Umbala webala zeSITA WordPress
Yiya kuhlobo lweselula